Kitendry hitsin-dàlana ao amin'ny iOS 7 | Vaovao IPhone
Toy ny amin'ny Mavericks, amin'ny iOS 7 dia afaka manendry andian-dahatsoratra fitambaran-taratasy Manome fehezan-teny vitsivitsy izy ireo, ny be mpampiasa, ny mahazatra indrindra ...
Manapa-kevitra ny tsirairay hoe iza no tena takiana, amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fomba fanomanana ny iOS 7 ka amin'ny alàlan'ny fidirana an'io fitambarana lakile io dia hanoratra ny lahatsoratra feno.
Ny anaran'ilay tadiavinay dia ny "hitsin-dàlana fitendry" ary azontsika atao ny mampifanaraka azy amin'ny Mac amin'ny alàlan'ny iCloud dia tsy maintsy avelantsika hampifanaraka ny "Documents et data" fotsiny, ary hasiantsika azy ireo amin'ny terminal roa.
Amin'ny iPhone dia mila manaraka ny lalana: Fikirana> General> Kitendry.
Hitanay fa eo ambanin'ny lohatenin'ny Quick Function dia tsy misy teboka fanombohana. Andao hamorona a Amin'ny fipihana ny «Mamorona asa haingana», dia miseho ny efijery iray izay tsy maintsy hamenoantsika zavatra roa:
Phrase: ny fehezan-teny feno araka izay tiantsika soratana.
Fiasa haingana: ny fitambarana lakile izay ampifandraisintsika ara-tsaina amin'io fehezanteny io (azy manokana ho an'ny tsirairay)
Vantany vao vita dia omentsika ny «afa-tsy»Ary hanana ny hitsin-dàlan'ny keyboard voalohany izahay.
Para manitsy asa haingana, mila miditra fotsiny isika ary manoratra azy io indray. HO AN'NY esoryTsy maintsy tsindrio ny "Edit" eo amin'ny efijery Keyboard ary afaka miditra hamafana ireo asa haingana izay tsy tiantsika hananana.
Ao amin'ilay ohatra nampiasako tamin'ity mini-tutorial ity, hanoratako ny "tara aho, 10 minitra", dia fantatro ny fehezanteny tamin'ny litera lt10. Raha izao aho dia manoratra an'ity combination ny litera amin'ny fampiharana rehetra ny iPhone dia hanome ahy ny safidy hanova azy ho an'ny fehezanteny feno.
Aza adino fa miasa ireo fitendry ireo mety hitovy amin'ny iPhone, iPad, Mac ... mila mampandeha ny syncing amin'ny iCloud fotsiny ianao araka ny nohazavaina teo aloha.
Fanazavana fanampiny - Tutorial: Ahoana ny fomba hanakanana ny pejy ao amin'ny Safari
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 7 » Kitendry hitsin-dàlana ao amin'ny iOS 7
Mario Cuevas  dia hoy izy:
Efa an-taonany maro izay no nisy, fa hey….
Valio amin'i Mario Cuevas 
Hehehehe dia hoy izy:
Mamaly an'i Hehehehe
Ampiasaiko amin'ny teny fohifohy ny ankamaroany. Izany hoe rehefa manoratra "pq" aho dia manova ahy io satria, koa, sns.